Maxkamadda sare oo sharci darro ku tilmaantay qorshaha BBI | Star FM
Home Wararka Kenya Maxkamadda sare oo sharci darro ku tilmaantay qorshaha BBI
Maxkamadda sare oo sharci darro ku tilmaantay qorshaha BBI
Guddi ka kooban 5 garsoorayaal ah oo ka tirsan maxkamadda sare ee wadanka ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday geeddisocodka sharci beddelka ee BBI.
Waxay xaakiinada su’aal geliyeen sharcinimada qorshahan ay si wadajir ah u billaabeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga.
Go’aammada maxkamadda waxaa qayb ka ah in hoggaamiyaha wadanka uu sameeyay xadgudub dastuuri ah.
Maxkamadda ayaa intaa ku dartay in cid kasta ay dacwad ku furi karto Mr. Kenyatta maadaama uu ka tallaabsaday waajibaadkiisa xilligii uu guda galayay hannaanka BBI.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada wadanka ee IEBC ayaa lagu dhaliilay dhammaan go’aamadii ay arrinkan ka qaadatay oo ay ka mid tahay xaqiijinta saxiixyadii shacabka laga soo uruuriyay.